दिनेश कुमार थपलिया, सचिव, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय – Child Pati
दिनेश कुमार थपलिया, सचिव, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
संघीय संरचनामा मन्त्रालयले बालमैत्रीको विषयलाई कसरी बढाउँछ ?
स्थानीय तहको क्षमता विकासका एजेण्डालाई सम्बोधन गर्छ । जस अन्तर्गत बालमैत्री, वातावरणमैत्री, कुपोषण अनि सरसफाईका विषयहरुलाई स्थानीय तहमा स्थापित गर्ने काम गर्छ । साथै कसरी बालमैत्रीलाई स्थानीय सरकारको मुख्य विषय बनाउने भन्ने विषयमा पनि यो मन्त्रालय केन्द्रित रहन्छ ।
अब बालमैत्रीका सूचक परिवर्तन हुन्छन् त ?
विद्यमान बालमैत्री सूचकहरु एकात्मक प्रणालीका आधारमा तयार गरेका थियौं । हिजो बालमैत्री परिवार, समुदाय, वडा, गाउँ, नगर, जिल्ला हुँदै केन्द्र हुन्थ्यो । अहिले प्रदेश थप्नु पर्ने अवस्था आउँछ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका निकाय स्थानीय तहका संरचना भित्र आएका छन् । यसैले नयाँ सूचक थपेर परिमार्जित रुपमा स्थानीय तहमा लैजानु पर्ने आवश्यकता छ । अब स्थानीय तह मार्फत यो अलि बढी स्वायत्त र स्वतन्त्र मोडलमा अगाडि बढ्छ ।
स्थानीय तहले बालबालिकाका विषयलाई कसरी सम्बोधन गरेमा सहज रुपमा बालमैत्री अवधारणा अगाडि बढ्छ ?
अब जनप्रनिधिहरु गाउँगाउँ अनि टोलटोलमा हुनुहुन्छ । जनप्रतिनिधिहरुले यसलाई बुझेर स्वीकार गर्नुभयो भने बालमैत्री अवधारणाका विषय र सूचकलाई प्रत्येक घरमा पु¥याउन सम्भव छ । समुदाय स्तरमा बालक्लब स्थापना र बालबालिकाको लागि उपयुक्त संरचना निर्माण गरेर बालबालिकालाई सहभागी गराएर बालमैत्रीको विषय सम्बोधन हुन सक्छ । बालमैत्री स्थानीय शासनको विषय अब स्थानीय तहको आनो विषय बनाएर लैजानुपर्छ ।
बालबालिकाको सवालमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको कस्तो सम्बन्ध र भूमिका रहन्छ ?
बालमैत्रीको विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहलाई विभिन्न किसिमका अनुदानहरु पठाउँछ । स्थानीय तहले आनो श्रोतबाट पनि खर्च गर्न सक्छ । बालमैत्री केन्द्रीय सरकारको प्राथमिकताको विषय भएकोले कुनै पनि स्थानीय तहले हामी बालमैत्रीका सूचक पूरा गर्नेगरी काम गर्छु भनेमा केन्द्रीय सरकारले विशेष अनुदान दिने ऐनमै व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकारले सोझै कुनै पनि वैदेशिक सहायता लिन नपाउने व्यवस्था छ । केन्द्रीय सरकारले विकासका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरुलाई स्थानीय तहमा पठाएर बालमैत्रीको लागि सहकार्य गराउन सक्छ ।
बालबालिका बालमैत्री अवधारणमा सहज रुपमा कसरी सहभागी हुन सक्छन् ?
बालबालिका स्वतः स्फूर्त रुपमा म कसरी सहभागी हुन सक्छु र मेरो तर्फबाट यसको प्राप्तिका लागि के के कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ भन्ने विषय बुझ्न र बुझाउन आवश्यक छ । त्यसलेबालबालिका आफू स्वयं सक्रिय बनेर सहभागी हुन सक्छन् । बालबालिकाले वयस्क र अग्रजहरुलाई तपाईहरु एकपटक आफू बालबालिका भएको सोच्नुहोस् अनि बालबालिकाको बारेमा कार्य गरिदिनुस् भनेर घरैदेखि आना विचार राख्ने र सोच्न बाध्य बनाउन सक्छन् । विभिन्न बालक्लबमा आवद्ध भएर पनि यसमा सहभागिता जनाउने उपयुक्त तरिका हो ।
अहिले यस मन्त्रालयले बालमैत्रीका लागि के गर्दैछ ?
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बालबालिका र बालमैत्री विषयलाई केन्द्रमा राखेर कार्य गरिरहेको छ ।
Previous Previous post: संघीयतामा बालबालिका
Next Next post: शिशाकलम